Pope Francis: Nnukwu obi uto nke onye kwere ekwe ọ bụla bụ ịza oku Chineke | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Pope Francis: Nnukwu obi uto nke onye kwere ekwe ọ bụla bụ ịza oku Chineke
Pope Francis kwuru na Sọnde na a na-achọta ọ joyụ dị ukwuu mgbe mmadụ nyere ndụ ya na ijere ọkpụkpọ Chineke.
“Enwere ụzọ dị iche iche iji mezuo atụmatụ Chineke nwere maka onye ọ bụla n’ime anyị, nke bụ atụmatụ ịhụnanya mgbe niile. Obi uto kachasi diri onye kwere ekwe obula bu iza oku a, iwepu onwe ya n’oru Chukwu na umu nne ya na ndi nwoke, ”ka Pope Francis kwuru na agwa Angelus ya na Jenụwarị 17.
N’ikwu okwu site n’ọbá akwụkwọ nke Vatican Apostolic Palace, popu kwuru na oge ọbụla Chineke kpọrọ mmadụ ọ bụ “ụzọ ịhụnanya ya”.
Ọ sịrị, "Chineke na-akpọ ndụ, kpọọ n'okwukwe ma kpọọ otu ọnọdụ na ndụ."
“Akpo mbu Chukwu bu na ndu, nke sitere na ya mee anyi mmadu; ọ bụ onye na-akpọ oku n'ihi na Chineke anaghị eme ihe n'usoro. Ya mere, Chineke na-akpọ anyị n'okwukwe ma bụrụ akụkụ nke ezinụlọ ya dị ka ụmụ nke Chineke. N'ikpeazụ, Chineke na-akpọ anyị n'ọnọdụ nke ndụ: ịnye onwe anyị n'ụzọ nke alụmdi na nwunye, ma ọ bụ nke nke ndị nchụ aja ma ọ bụ ndụ e doro nsọ.
Na vidio a na-agbasa ozi, popu gosipụtara ngosipụta mbụ nke nzukọ Jizọs na ịkpọ ndị na-eso ụzọ ya bụ Andrew na Simon Peter na Oziọma Jọn.
“Ha abụọ soro Ya n’ehihie ahụ, ha nọnyeere Ya. O siri ike iche n’echiche ka ha nọ ọdụ na-ajụ Ya ajụjụ ma karịakwa ka ha na-ege Ya ntị, na-enwe mmetụta nke obi ha na-enwu ọkụ karịa ka Nna-ukwu ahụ kwuru,
“Ha na-enwe mmetụta nke ịdị mma nke okwu ndị na-eme ka olileanya ha kasịnụ nwee. Na mberede ha na-achọpụta na, ọbụlagodi na ọ bụ mgbede, ... na ìhè nke naanị Chineke nwere ike inye ba n'ime ha. Mgbe ha gara laghachikwuru ụmụnne ha, ọ thatụ a, ọkụ a na-ejupụta n’obi ha dịka mmiri na-asọsi ike. Otu n'ime ha abụọ, Andrew, gwara nwanne ya nwoke Saịmọn na Jizọs ga-akpọ Pita mgbe ọ ga-ezute ya: "Anyị ahụwo Mezaịa ahụ".
Pope Francis kwuru na ọkpụkpọ Chukwu bụ ịhụnanya mgbe niile ma ọ bụ naanị ịhụnanya ga-aza ya.
"Brothersmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị, chere oku nke Onyenwe anyị ihu, nke nwere ike ịbịakwute anyị n'ọtụtụ ụzọ ọbụlagodi site na ndị nwere obi ụtọ ma ọ bụ nwee mwute, ihe omume, oge ụfọdụ omume anyị nwere ike bụrụ nke ịjụ: 'Mba, m na-atụ ụjọ" - ịjụ n'ihi o yiri ka ọ ga-emegide ọchịchọ anyị; na kwa ụjọ, n'ihi na anyị na-ewere ya kwa ihe na-achọghị ma na-enweghị obi iru ala: "Oh agaghị m eme ya, ọ ka mma, ibi ndụ udo karịa more Chukwu nọ ebe a, m nọ ebe a" Mana oku Chukwu bụ ịhụnanya, anyị ga-anwa ịchọta ịhụnanya n’azụ ọkpụkpọ oku ọ bụla ma jiri ịhụnanya zaghachi ya, ”ka o kwuru.
“Na mbido enwere nzute, ma ọ bụ karịa, enwere‘ nzute ’Jizọs na-agwa anyị nke Nna, na-eme ka anyị mara ịhụnanya ya. Ma mgbe ahụ ọchịchọ ịkọrọ ya ndị anyị hụrụ n'anya na-ebili n'onwe anyị kwa: "Ezutewo m ịhụnanya". "Ezutewo m Mesaya ahụ." "M zutere Chineke." "M zutere Jesus." Achọtara m nzube nke ndụ. " Na okwu: "Achọtala m Chineke" ".
Popu ahụ kpọrọ onye ọbụla òkù icheta oge n'ime ndụ ha mgbe "Chukwu mere onwe ya karịa, yana ịkpọ oku".
Na ngwụcha okwu ya Angelus, Pope Francis gosipụtara ịdị nso ya na ọnụ ọgụgụ ndị bi na agwaetiti Sulawesi, Indonesia, nke oke ala ọma jijiji mere na Jenụwarị 15.
“Ekpere m maka ndị nwụrụ anwụ, maka ndị merụrụ ahụ na ndị tufuru ụlọ na ọrụ ha. Ka Onye-nwe-anyị kasie ha obi ma kwado mgbalị nke ndị kwere nkwa inye aka, ”ka popu kwuru.
Pope Francis chetakwara na "Izu Ekpere maka Unitydị n'Otu Ndị Kraịst" ga-amalite na Jenụwarị 18. Isiokwu afọ a bụ “Nọgidenụ n'ịhụnanya m, ị ga-amị ọtụtụ mkpụrụ".
“N’ụbọchị ndị a, ka anyị kpekọọ ekpere ọnụ ka uche Jizọs wee mezuo:‘ Ka ha niile bụrụ otu ’. Dị n’otu dịkarịsịrị ọgụ karịa esemokwu, ”ka o kwuru.